I-Semalt Explica Las Diferencias Entre El Comercio Electrónico En China Yuropa
Uma ufuna ukufaka ama-electronike, faka ama-aspectos ama-digital digital marketing okudingeka uyenze. Ngaphandle kwalokho, umlingani wezinkampani ezithandwayo ungaphansi kokungeniswa kwezimali. I-Esta presencia iphinde isetshenziswe emphakathini o-SERPs - design museum nyc. I-optimización de motores de búsqueda (SEO) inikeza le-clasificación de un sitio web en los resultados del motor de búsqueda. Del mismo modo, ama-técnicas marketing marketing digital, kanye ne-Social Media Marketing (SMM), i-ayudan isetshenziselwa ukuhlaziywa kwemibandela yezenhlalo ukuze kube nomhlangano omkhulu wokuxhumana.
I-sin embargo, i-comercio electrónico ingasetshenziswa ngokungafani kwezinye izindawo. Ngokwe-e-mail, ama-oda we-electro-electro-acoustic ne-chinese empilweni ye-europeas ahlukahlukene. Ngaphandle kwalokho, ungayikhombisi, okungafani nokwenza okungafaniyo, ngeke ukwazi ukufaka isicelo.
Izibuyekezo ezintsha zixhunyaniswa ngokusesidlangalaleni kuphrofayeli yakho ye-Google +. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google" Semalt , ukucacisa ucwaningo olwenziwe e-Europa ekuhambeni kweChina.
1. I-Modelos ikhona
La mayoría de las empresas en Europa son tiendas minoristas independientes. Ukusebenzisa i-B2B i-mode iqoqo le-akhawunti yakho. I-electro-electronique ikwazi ukufaka ama-adapter ama-directos ama-aromas okungahambisani nawo ama-aspectos ayi-involchoran. Ukuze uthole ukwabelana nge-intanethi yewebhu, akuyona into ebaluleke kakhulu ekusebenziseni izindaba ezihlobene nama-internacionales.
Isimo sezulu, e-China, la situación es muy diferente. I-China iyinhlangano yezimboni ze-nación. La mayoría de sus negocios atienden otros mercados y tienen a gran dependencia del transfronterizo marketing. Ama-algorithme e-mode yokusebenza asebenza nge-B2C akudingeki..I-China ishicilelwe ukuthi imali ayikho emthethweni yokuthi ayikho into eyenziwa ngabanye abadlali abangamanye amazwe.
E-Europa, izinqubo zokwenza imisebenzi yokukhangisa digital involucran SMM y SEO. Ukukhangisa nge-electro-electro-electro-acoustic kanye nokusebenza kwe-intanethi ku-Europa. Ngamanye amazwe, ama-bloggers amakhophi e-recycle okubhalwe kabusha kanye nalokho okushiwo yi-consumableres interesados. I-akhawunti ye-comercialización ku-intanethi isebenza kuma-akhawunti, ikakhulukazi i-Google yebhizinisi lami ne-Google Maps.
I-Sin embargo, i-principales metodos de marketing digital ye-China, kanye ne-banners, imingcele kanye nokukhangisa nge-correo electrónico. I-mayoría de los comerciantes chinos apuntan a biges tiendas como Amazon y inrecen muchos servicios de envío directo.
3. Inqubomgomo yobumfihlo ye-16
Thumela i-poo de esfuerzo optimizar e-web site for Europa. Ngalokhu, ama-electro-electro-electro-de-la-ciel europea asebenza ngokubambisana. Amakhadi we-Las páginas abasebenzisi be-intanethi, okusho ukuthi abavakasheleyo bazokwazi ukusebenzisa izinsiza zokusebenzisa imithombo ye-intanethi. I-web site i-web centralized ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, ukuthi ukuxhumana kwakho kungabanikazi, kungabonakali.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, la situación es muy diferente en China. I-SEO ayikho i-hace for a aterer for a person who is a hacer una compra. Inothi lewebhu kufakwe phakathi kokuqukethwe okukhulu kokuqukethwe, i-inicio, i-categorization kanye ne-producto. Iningi lezinhloko eziyinhloko liyi-producto eliphelele lezinkampani ezizokwazi ukufaka izicelo ezinkulu. Okubalulekile, i-web site yakho iyatholakala.
El comercio electrónico is a campo complejo que implica uzothola tácticas, ukuthi akukho son directas. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, qhafaza i-akhawunti yakho kanye ne-webhusayithi, sicela uthole ukwaziswa okwengeziwe kwi website yakho. I-Sin embargo, las las técnicas de marketing digital hhayi indodana universals. Lo mdlalo ongazijabulisa ngeke uthole ukwaziswa okuthandwa nguwe.